Shwemyanmar – Page6– Shwe Myanmar
ဇီးဖြူသီးကရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ================== ================== Goose Berry (ဇီးဖြူသီး) (ဇီးဖြူသီး) Gooseberry ဇီးဖြူသီးကို ဖျော်ရည်လုပ်သောက်တာ၊ကြော်စားတာ၊ထောင်းစားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အသီးတစ်မျိုးလို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ဇီးဖြူသီးမှာ ဗီတာမင် […]
Posted inကျန်းမာ​ရေးLeaveaComment on ဇီးဖြူသီးကရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
ထောပတ်သီးနှင့် ပျားရည် ================== ================== ခရီးသွားလို့ မွဲခြောက်ပြီး မဲညစ်သွားတဲ့ အသားအရေတွေအတွက် ထောပတ်သီးမှာ သူမတူတဲ့ အံ့မခန်းအစွမ်းတွေရှိပါတယ်။ ထောပတ်သီးက အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေး တဲ့အပြင် […]
Posted inကျန်းမာ​ရေးLeaveaComment on ထောပတ်သီးနှင့် ပျားရည်
** ကျောက်ကပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ **
** ကျောက်ကပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ ** ================== ================== အချို့သူတွေမှာ ကျောက်ကပ် ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် ရောဂါဝေဒနာတွေကို ခံစားရတတ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ဘာလက္ခဏာမှ […]
Posted inကျန်းမာ​ရေးLeaveaComment on ** ကျောက်ကပ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ **
သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်. ##################### တရုတ်သတင်းစာ မှာလည်း ပါလာတဲ့ အတွက် နိုင်ငံပုံရိပ် အင်မတန်မှကျဆင်းပါတယ်. ကလေးငယ်များကိုပါတောင်းရမ်းဖို့ခိုင်းစေတဲ့အတွက် ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်. တရုတ်လူမျိုးခရီးသွားများဆီကနေမူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်အလယ်ပေါက်ခြံစည်းရိုးတစ်ဖက်ကနေ ပိုက်ဆံတောင်းခြင်း ( […]
14.12.2017 မှ 20.12.2017 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလဟာ ကံဇာတာမြင့်မားနေတဲ့ကာလပါ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အလုပ်အကိုင်တို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်မည်။ စန်းပွင့်နေခြင်းကြောင့်အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး […]
မိတ္ထီလာတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် လူသတ်၍ကားနောက်ဖုံးအတွင်းထည့်ထားသည့်အမှုမှတရားခံများကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
မိတ္ထီလာတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် လူသတ်၍ကားနောက်ဖုံးအတွင်းထည့်ထားသည့်အမှုမှတရားခံများကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က မိတ္ထီလာမြို့၊ ဈေးရှေ့ရပ်၊ ကားဝပ်ရှော့တွင် […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on မိတ္ထီလာတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် လူသတ်၍ကားနောက်ဖုံးအတွင်းထည့်ထားသည့်အမှုမှတရားခံများကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ
စာသင်ချိန်တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ဖုန်းမသုံးရန် ပညာရေးဝန်ကြီး သတိပေး
စာသင်ချိန်တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ဖုန်းမသုံးရန် ပညာရေးဝန်ကြီး သတိပေး 13-Dec-2017 tagged as ပညာရေး ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ဆရာ၊ ဆရာမများအနေနှင့် စာသင် […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on စာသင်ချိန်တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ဖုန်းမသုံးရန် ပညာရေးဝန်ကြီး သတိပေး
ခင်ပွန်းကိုသတ်ပြီး ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ ပြုလုပ်ကာ လူစားထိုးရန် ကြံစည်သည့် အိန္ဒိယ အမျိုးသမီး အဖမ်းခံရ ================== ================== ခင်ပွန်းသည်ကို သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ […]
နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်တဲ့ သတင်းထောက် ၂ ယောက်
နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်တဲ့ သတင်းထောက် ၂ယောက် …… ×××××××××××××× ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တော-ဘူးသီးတောင်ဒေသ၌ လုံခြုံရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန်လည်အနားပေး စုဖွဲ့လျက်ရှိသည့် လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်တဲ့ သတင်းထောက် ၂ ယောက်
ရန်သူ့ကမ်းရိုးတန်းအား ခြေလျင် နဲ့တင့်များတင်ဆောင်၍ သိမ်းပိုက်နိုင်စေမည့် 16 series ကမ်းထိုးယာဉ်များ
ရန်သူ့ကမ်းရိုးတန်းအား ခြေလျင် နဲ့တင့်များတင်ဆောင်၍ သိမ်းပိုက်နိုင်စေမည့် 16 series ကမ်းထိုးယာဉ်များ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ ➳ […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ရန်သူ့ကမ်းရိုးတန်းအား ခြေလျင် နဲ့တင့်များတင်ဆောင်၍ သိမ်းပိုက်နိုင်စေမည့် 16 series ကမ်းထိုးယာဉ်များ